Tahaka ny ataon'ny mpandraharaha ara-bola dia manao raharaham-barotra iray ianao, tsy ho mpanjifa fotsiny ianao, midika izany fa misy foana ny lamandy. Mety tsy ho tonga ny 100% raha toa ka manana fifanarahana goavana sy mandaitra ho an'ny mpanjifany lehibe indrindra izy ireo.
Noho izany dia mila mahatsapa ny rafitra ara-dalàna & rafitra fampahafantarana ianao mba hiantohana ny fifampiraharahana eny amin'ny arabe, miantoka fa manana fifandraisana ianao ao amin'ny biraon'ny mpamangy izay azonao atao foana mba hanamarinana ny fandrosoana. Mety ho mpanolotsaina ho an'ny tanora na sekretera izany. Raha fantatrao ny dingana lehibe fantatrao hoe inona no fanontaniana apetrahana rehefa eo an-damosinao ny andaniny.
Azonao atao ny mampitombo ny lisitry ny pejin-dresakao izay mipetraka eo anoloana ny rakitra momba ny fifanarahana, raha vantany vao mahazo an'io ianao dia ho mora kokoa amin'ny olona hanampy anao amin'ny ho avy izany satria misy rafitra fototra.
Miangavia mba hitady ilay mpitory izay afaka manome ny haavon'ny asa ilainao saingy tsy dia lehibe loatra ianao dia tsy manan-danja amin'izy ireo.
Manaova fikarohana vitsivitsy amin'ireo rohy ireo;
http://www.lawsociety.org.uk (Mitady mpitsoa-ponenana)
Fidio tsara ny mpanolo-tsainao ara-dalàna - miantoka ny tsy maha-ambany anao ny mpanjifany